Madaxweynaha Kenya Iyo Raysal Wasaarihii Hore Ee Dalkaasi Oo Lagu Eedeeyey Dahab Laga Iibiyey Boqortooyada Imaaraadka Carabta | Berberatoday.com
Madaxweynaha Kenya Iyo Raysal Wasaarihii Hore Ee Dalkaasi Oo Lagu Eedeeyey Dahab Laga Iibiyey Boqortooyada Imaaraadka Carabta
Kenya(Berberatoday.com)-Magacyada Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo ra’iisul wasaarihii hore Raila Odinga ayaa lagu xusay fadeexad ku saabsan dahab been abuur ah oo laga iibiyay qof ka tirsan boqortooyada Imaaraadka Carabta, sida ay shaaciyeen qaar ka mid ah wargeysyada kasoo baxa Kenya, sida Standard iyo The Star.
Waxaa in muddo ahba soo jiitamaysay fadeexad la xidhiidha dahab la kala iibinayey oo si khiyaano ah loogu khalday xubno ku ka tirsan boqortooyada Imaaraadka Carabta, arrintaasoo lugaha lasoo gashay siyaasiyiin reer Kenya ah.
Waxa lagu soo warramay in dahab been abuur ah lagu qabtay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Jomo Kenyatta, xilli laga soo dhoofiyay waddanka Koongada Dimuqraaddiga ah.
Arrintan ayaa markii hore loo xidhay 15 qof oo lagu tuhusan yahay inay ku lug leeyihiin, kuwaasoo ay baadhitaanno ku socdaan.
Madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto ayaa difaacay Mr Kenyatta, Balse madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto iyo hoggaamiyeyaal kale oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa gaashaanka ku dhuftay sheegashada madaxweynaha lagula xidhiidhiyay arrinta fadeexadda, sida aan kasoo xiganay wargeyska The Star.
Badhasaabka ismaamulka Kiambu Ferdinand Waititu ayaa si cadho leh u sheegay in dadka arrimahan lagu tuhunsan yahay aan looga baahneyn inay madaxweynaha lugaha usoo galiyaan.
Hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayey uga digeen inay Mr Kenyatta ku xidhiidhiyaan fadeexaddan.
Sidoo kale waxay sheegeen in wasiirka arrimaha gudaha Fred Matiang” ay ka doonayaan inuu faahfaahin ka siiyo sida dalka looga ilaalinayo soo galitaanka dahabka been abuurka ah.
Philip Etale oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga ODM ee uu Raila Odinga hoggaamiyo ayaa sidoo kale been abuur ku tilmaamay arrintaas, waxa uuna sheegay ra’iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinka aanu ka qeyb qaadanin qandaraaska ku saabsan dahabka been abuurka ah.
Warar hoose oo aan heleyno ayaa sheegaya in hadda aan la ogeyn meel uu jaan iyo cidhib dhigay Moses Wetangula, oo hore uga tirsanaa siyaasiyiinta sida weyn ugu dhow Raila Odinga.